Kuwa ugu fiican ee lagula taliyo VPN-yada bilaashka ah [Eeg liiska]
Inicio/Talo soo jeedin/Kuwa ugu fiican ee lagula taliyo VPN-yada bilaashka ah [Eeg liiska]
Talo soo jeedinadeegyadaTiknoolaji
0 4.593 7 daqiiqo akhri
Ka hadal a Xiriirka VPN wuxuu ka hadlayaa amniga, taasi waa sababta aan halkan ugu soo bandhigeyno liistada ugu adeegsiga badan ama ugu fiican ee lagu taliyo ee bilaashka ah VPN-yada. Feejignow, maxaa yeelay ilaalinta xogtaada waa mid aad muhiim u ah; sida wax kasta oo ku saabsan macluumaadkaaga shakhsiyeed. Sidii aan kugu baray maqaal hore sida loo rakibo VPNMaanta waxaan kuu sheegi doonaa sida xiriirka noocan ah noogu hoos dhigaayo gaashaankiisa difaaca si aanan ula kulmin wax dib-u-dhac ah oo ku saabsan xogteenna oo aanan la kulmin wax nuucaan ah.
HA KALA DUWAN! Halkan waxaan ku tusayaa waxa ay yihiin Kuwa ugu fiican ee lagu taliyay ee bilaashka ah, si aad u ogaatid oo aad waxbadan uga ogaatid iyaga.
1 NordVPN, ugu fiican ee bilaashka ah ee lagula taliyay
2 Shabakada ProtonVPN, oo sifiican ugufiican VPNs tallada ugu fiican
3 kulkulul Shield
8 Farqiga udhaxeeya VPNyada lacag bixinta ah iyo VPNsyada lagu taliyay ee bilaashka ah
9 Noocyada ugu fiican ee lagula taliyo VPN bilaash ah
10 Noocyada bixiya VPN's
11.1 Waan jeclahay tan:
Xaqiiqdu waxay tahay in wax waliba ka fog yihiin hadiyad ahaan, maaddaama dhammaan adeegsiga bilaashka ah ee bilaashka ah VPN isku xirnaanta ay leeyihiin xaddidaadyo. Qaarkood aad ayey u gaabiyaan ama waxay leeyihiin xaddidaad waqtiga daalacashada, iyo kuwo kale. Sababtaas awgeed, waxaan u maleynayaa in waayo-aragnimadaadu aysan noqon doonin tan ugu fiican, markaa waa inaad go'aansataa inaad hesho mid la bixiyo ka hor mid ka mid ah VPN-yada bilaashka ah ee lagu taliyay ee liiska ku jira.
Si kastaba ha noqotee, waxaan kuu xaqiijinayaa in liistada ugu adeegsiga badan uguna fiican ee bilaashka ah ee loo yaqaan 'VPNs' (waqti xaddidan), waxaad doorbidi doontaa inaad bixiso waxoogaa kharash ah si aanad saacado ugu qaadan sugitaanka fiidiyowga ama filimka aad rabto inaad ku aragto internetka si aad u buuxiso . Waxaan adkeyneynaa in waqtiga firaaqadu uu xadidan yahay, nooca muddada tijaabada. Si kastaba ha noqotee, waad tijaabin kartaa mid kasta ka dibna waxaad go'aansan kartaa midka kuugu habboon inaad isticmaasho si aadan u dareemin khiyaano mar uun xaddidaadda of bilaashka ah iyada oo aan lagu sii dheerayn, MIRKA.
NordVPN, ugu fiican ee bilaashka ah ayaa lagula taliyay
Kuwa ugu fiican ee bilaashka ah VPN-yada. In kasta oo aysan gebi ahaanba bilaash ahayn, waxay leedahay dammaanad 1 billood oo dammaanad lacageed ah. Waa ikhtiyaar aad ufiican marka aad safar aadayso, ha ahaato ganacsi ama si fudud fasax. Waxay ku siineysaa amniga in lagu ilaaliyo waqtiga aad guriga ka maqantahay oo dhan. Waad soo dejisan kartaa Halkan
Waxa ugu fiican ayaa ah inay ku siinayso iswaafajin ku habboon aaladaha ugu badan ee xilligan la isticmaalo, macOS, Windows, Linux, iOS iyo Android. Marka hada waad ogtahay, halkan waxaad kuheysaa ikhtiyaar aad ufiican oo aad kugula safri karto dhamaan xasiloonida maskaxda waadna ku raaxeysan kartaa adoon wax dhib ah qabin.
BARO: Sida loo rakibo VPN kombiyuutarkaaga
Shabakada ProtonVPN, oo sifiican ugu yaalo Vpn-ta ugu fiican ee lagu taliyay
Waxay si siman u tahay badbaado oo bilaash inkasta oo xadidaadyo gaar ah shaki la'aan. Waxaa sii daayay milkiilayaasha shirkadda ProtonMail; waxayna bixisaa amaan wanaagsan marka la eego taariikhdaada iyo xogtaada shaqsiyeed. Waa in la ogaadaa in aysan ku keydin wax ka mid ah dhaqdhaqaaqaaga shabakadda.
Khibraddeenna, ProtonVPN waxay u baahan tahay horumarin, tan iyagaa iska aqbalay, maadaama adeeggooda moobiilku uusan weli ku siinaynin dhammaan raaxada aad u baahan tahay. In kasta oo aad u isticmaali kartid dhufto ee kala duwan sida lagu tilmaamay, nooca ugu dhammaystiran ayaa laga helaa Windows. Waad soo dejisan kartaa Halkan.
Waa nooc ka mid ah isku xirka ugu xasiloon uguna dhakhsaha badan. In kastoo aysan xad lahayn waqtiga daalacashada, waxaad heli doontaa xayeysiin badan; Iyada oo ay taasi jirto, waad ku raaxeysan kartaa faa'iidooyinka ay bixiso, taas oo ka dhigeysa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee isticmaala maanta. Waad soo dejisan kartaa Halkan.
Waxaa laga yaabaa inaad daneyneyso: Sida loo dedejiyo kombuyuutarkaaga
Haddii xayeysiintu dhibaato kugu tahay, tani waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican. Ka mid ah VPN-yada bilaashka ah Hide.me waa mid ka mid ah kuwa ugu yar ee la xayeysiiyay oo aad loogu kalsoonaan karo. Si kastaba ha noqotee, nooca bilaashka ah wuxuu leeyahay xad MB bille ah.
Haddii ay tahay inaad aqbasho inay aad u xaddidan tahay markay tahay fulinta nooc ka mid ah soo degsasho. Si la mid ah, waa ikhtiyaar ay tahay inaad tixgeliso maxaa yeelay faa'iido badan ayey u leedahay sida kuwii hore. Waad soo dejisan kartaa Halkan.
Mid kale oo loo tixgeliyo mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee lagu taliyo ee bilaashka ah VPNs waa kan. Waa wax aad ufiican haddii ay dhacdo inaad wax dhibaato ah ku qabin sugitaanka inta fiidiyowyadu socdaan. Qaabkeeda bilaashka ah kuma bixiso xawaaraha la doonayo, in kasta oo ay xannibeyso xayeysiinta had iyo jeer dhibsata.
Markaa haddaad waqti haysato ama aadan ka mid ahayn kuwa degdega ku socda, markaa ikhtiyaarkan ayaa adiga kugu habboon. Laakiin xusuusnow inaad dulqaad yeelato markii aad rabto inaad aragto fiidiyoow aad jeceshahay, tani waxay noqon kartaa xaddidaad in lagu xisaabtamo, maadaama mararka qaarkood aadan haysan sabirka lagama maarmaanka u ah inaad in badan sugto. Waad soo dejisan kartaa Halkan.
Waxay hadda tahay mid ka mid ah shabakadaha ugu fiican ee lagula taliyo ee VPN. Nooca bilaashka ah inkasta oo la bixiyo 500MB bishiiba waa mid dhakhso badan oo lagu kalsoonaan karo. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad si qarsoodi ah uga baarto dalal kala duwan, waxaad ku isticmaali kartaa aalado kala duwan, maxaa yeelay xitaa waxay leedahay App loogu talagalay Android.
Intaa waxaa sii dheer, isdhexgalkiisu waa sahlan yahay in loo isticmaalo kan ugu cusub berrinka. Markaa waa ikhtiyaar kale oo aad ufiican oo aad gacantaada ku hayso. Waad soo dejisan kartaa Halkan.
Kaliya kuma siineyso faa iidooyin ahaan biraawsar, waxay sidoo kale leedahay VPN bilaash ah oo horeyba loogu dhexbiray qaybtiisa loogu talagalay horumariyeyaasha. Shabakadan waad ka furi kartaa waxyaabaha aan laga daawan karin gobolkaaga (marka laga hadlayo Netflix USA); si la mid ah, waxay ku siineysaa nabadgelyo inta aad ka dhex baareyso internetka oo dhan. Waad soo dejisan kartaa Halkan.
Halkan ka daawo: Muxuu yahay biraawsarka TOR iyo sida loo isticmaalo?
Farqiga udhaxeeya VPNyada lacag bixinta ah iyo VPNsyada lagu taliyay ee bilaashka ah
Waayahay, waxaan ku siinay tixraac kooban oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah VPN-yada bilaashka ah ee lagu taliyay, faa'iidooyinka ay bixiyaan iyo faa'iido darrooyinka qaarkood. Sida iska cad oo ka fikiraya wax walba, waxaa la fahamsan yahay in qaar badani aysan haysan miisaaniyad ay ku helaan lacag bixin VPN, ama kuwa kale oo kaliya doonaya inay tijaabiyaan maareynta mid kasta oo ka mid ah.
Kuwa bilaashka ah, ee aan horey u soo sheegnay, waxay leeyihiin xoogaa xaddidan. Waa inaad ku xisaabtantaa waxa ay ku siinayaan inay yihiin nuxur ahaan, haddii aad si wanaagsan u hubiso xogtaada shakhsiga ah, adigoo kuwani bilaash yihiin, shakigu weli waa jiraa. Dhinaca kale, kuwa la bixiyo, haddii ay ku siiyaan adduunyo waxtar leh. Waxaan kuu sheegi karnaa faraqyo badan oo u dhexeeya midka iyo tan kale, maadaama ay aad u calaamadeysan yihiin, iyaga dhexdooda waxaan ka xusi karaa waxyaabaha soo socda oo aan dhibaato lahayn:
Noocyada ugu fiican ee lagula taliyo VPN bilaash ah
Adeegga bilaashka ah, waxaad kala go 'ku yeelan doontaa xayeysiisyo badan oo ganacsi, dhanka kale, lacag bixinta ma heli doontid cillad noocan oo kale ah tan iyo markii ay baabi'ineyso hakadka joogtada ah ee xayeysiinta. Markaad sidan sameyso waxaad isweydiineysaa inay mudan tahay inaad ku sii socoto bilaash.
Nooca mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee la taliyay ee bilaashka ah VPNs, waxaad yeelan doontaa xiriir aad u kooban oo kuxiran server kasta, sida xaalada isku xirnaanta sida Opera tusaale ahaan. Laakiin isku xirnaanta lacagta la bixinayo ayaa adeegeyaashu kuugu jiri doonaan adeeggaaga si ka wanaagsan, shaki la'aan waa inaad lacag ku bixisaa inaad haysato nooc xiriir ah oo aan kaa dhumin doonin samirkaaga.
Runtu waxay tahay iyadoo lalaxiriirinayo liiska ugufiican ee laguugula taliyo VPNs ma bixin doontid hal dinaar, inkasta oo aad ku raaxeysan karto faa'iidooyin badan; laakiin lacag bixinta haddii ay ku siiso shuruudo wanaagsan oo adeegsi ah iyo faa'iidooyin aan la soo koobi karin oo la xiriira kuwa bilaashka ah, waa inaad ku bixisaa inaad ku raaxeysato.
Xidhiidhada bilaashka ahi waxay leeyihiin astaamaha xaddidaadda isticmaalka, ama wakhtiga daalacashada, si kale haddii loo dhigo, waxay ku siinayaan xawaare ka yar kan ku xidhan. Intaad kujirto adeeg lacag bixin ah, waad baari kartaa ilaa iyo inta aad rabto, maadaama aadan heli doonin nooc xayiraad ah, sidaas darteed waa faa iido kale oo kujirta kuwa lacagta lasiiyay.
Noocyada bixiya VPN's
Iyada oo xiriir la bixinayo waxaad ku kalsoonaan kartaa adduun ballaadhan oo xulashooyin ah si aad uga dhigto bartaada ugu raaxada badan uguna raaxada badan; Xaqiiqda ka soo horjeedda waxay dhacdaa iyadoo la adeegsanayo mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee la taliyay ee bilaashka ah VPN-yada, halkaas oo aad ku heli doonto wax walba oo aad u xaddidan. Tan waxaan sidoo kale u arkaa inay tahay faa'iido kale oo ku jirta mushaharka.
Haddii aad tahay mid ka mid ah soo dejistayaasha ama taageerayaasha isboortiga, adoo adeegsanaya mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee lagu taliyo ee bilaashka ah VPNs maahan midka ugu fiican, maaddaama xiriir bilaash ah uu la yimaado xaddidaadyo badan oo ku saabsan habsami u socodka; halka mushaharku ka sii furan yahay dareenkaas. Taasi waa sababta ka hor intaadan go'aan ka gaarin hal ikhtiyaar ama mid kale, waxaan kugula talinayaa inaad raadsato macluumaad kaa caawin kara ka hor intaadan sameynin.
Adoo iibsanaya xiriir lacag bixin halkii mid ka mid ah bilaashka loo adeegsaday liiska VPN, waxaad hubin kartaa in dhammaan macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed aad loo ilaalin doono; In kasta oo mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu taliyo ee bilaashka ah ee loo yaqaan 'VPNs' tani caadi ahaan maahan kiiska, maadaama xaaladaha qaarkood macluumaadkaagu uu noqon doono mid aad u nugul. Tani waa wax maskaxda lagu hayo ka hor intaadan gaarin go'aanka ugu dambeeya.
Mid ka mid ah faa'iido darrooyinka ugu caansan ee ku jira noocyada ugu fiican ee lagu taliyay ee bilaashka ah VPNs ayaa ah inay ka dhigeyso in daalacashadaada aysan gebi ahaanba fiicneyn; In kasta oo lagu jiro lacag bixinta marka lagu daro dhammaan amniga aad ku heleyso xogtaada shakhsi ahaaneed, isku xirku wuxuu noqon doonaa mid aad u dhakhso badan oo aan xad lahayn. Anoo tixgelinaya wax kasta oo aan soo sheegnay, waxaan rajeynayaa inay kuu fududaan doonto inaad gaarto go'aan ku saabsan adeegga bilaashka ah, ama adeegga lacag-bixinta ah.
Sidaad aragtay, ee ku saabsan farqiga u dhexeeya VPN-yada ugu adeegsiga badan iyo kuwa ugu fiican ee la taliyay iyo kuwa la bixiyay, wax walba malab malab ku jira, laakiin waxa la taaban karo ayaa ah in marka lagu daro qiimaha ay jiraan kala duwanaansho kale oo aad u calaamadeysan. In kasta oo ay tahay oo kaliya inaad ka fikirto baahiyahaaga, iyo gaar ahaan amniga marka la eego macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo qarinta xogtaada, sida cinwaankaaga IP.
muuqaalada vpn bilaash ah muuqaalada bixinta vpn kuwaas oo ah kuwa ugu wanaagsan vpn soo dejiso hotspot gaashaan vpn soo degso nord soo dejiso opera soo dejiso proton vpn soo qaado tunnelbear vpn soo dejiso vpn hide.me soo dejiso windcribe vpn dide.me vpn khilaafaadka vpn bilaash ah oo la bixiyo hide.me ugu fiican vpn gaashaan kulul vpn rakibi gaashaan kulkulul vpn rakibi proton vpn liiska ugu fiican vpn liiska gaaska gaashaan vpn vpn bilaash ah ugu fiican vpn hide.me ugu fiican vpn nord opera ugu fiican vpn ugu fiican vpn proton vpns ugu fiican Opera biraawsarka nord vpn ugu shaqeeyaa vpn Opera vpn liiska proton vpn waxa vpn lagu soo dejinayo kombuyuutarkayga shabakada proton vpn tunnelbear ugu fiican vpn tunnelbear vpn vpn lacag la'aan ah vs vpn lacag la'aan ah vpn bilaash ah vpn qarin.me vpn nord opera vpn tunnelbear vpn vpn dabaysha Liiska vpns ee lagu taliyay ku qor liiska vpn windcribe fiican vpn dabayl vpn
Sida VPN loogu rakibo kombiyuutarkaaga [Easy Guide]
Waa maxay Khariidadda Fikradda: Asalka, faa'iidooyinka iyo maxay u yihiin?